Siddee baad u heleysaa kaarka aqoonsiga oo diyaarka ah? | Skatteverket
» Siddee baad u heleysaa kaarka aqoonsiga oo diyaarka ah?
Caadi ahaan wexeey qaadaneysaa labo isbuuc inta uu kaarka aqoonsigu diyaar ka noqonaayo. Haddii ay noqoto in foomkaada wax ku jiro in la baaro waqtiga aad kaarka ku heleysid baa dheeraan karo.
Markii uu kaarka aqoonsigu diyaar noqdo warqad ka socoto Hey’adda cashuuraha baad heleysaa. Kaarka waxaad ka doonan kartaa xafiiskii aad kaarka ka dalbatay. Warqadda kuu soo dhacdo keeydso oo soo qaad markii aad kaarka soo doonaneysid.
Haddii aadan helin kaar aqoonsi
Haddii aadan kaarka helin wexeey ku xirantahay in aadan shuruudihii lagaa rabay in buuxin. Haddii aad u aragtid in aad xaq u leedahay in aad heshid kaarka aqoonsiga Hey’adda cashuuraha go’aankooda baad ka dacwoon kartaa.
Dacwadaas si aad u suubin kartid waa in aad dacwo dheerad ah wax la yirrahdo u dirtid Hey’adda cashuuraha. Hey’adda cashuuraha dacwadaada dheeraadka ah wexeey u diraayaan maxkamadda idaarada, oo markaas go’aan ka gaareyso haddii eey Hey’adda cashuuraha saxsanyihiin ama qaldanyihiin.